Ny Blog dia tsy Forum - Manao azy ireo ho fitaovana fivarotana orinasa lehibe | Martech Zone
Ny Blog dia tsy Forum - Manao azy ireo ho fitaovana marketing ho an'ny orinasa lehibe
Sabotsy, Oktobra 27, 2007 Talata, Martsa 27, 2012 Douglas Karr
Ny ahiahy matetika ateraky ny fifanakalozan-kevitra momba ny bilaogy ataon'ny orinasa ho tetikady fandraharahana dia ny tahotra ny mpanjifa mandefa ny fitarainany. Rehefa napetraka tao amin'ny kilasy nataoko tamin'ny herinandro lasa io fanontaniana io dia tena tsy azoko ny hevi-dehibe iray izay matetika resahiko. Ny fototr'izany dia ny tsy fitovizan'ny forum sy bilaogy.
Inona no mampiavaka ny bilaogy amin'ny forum?
Mitsidika bilaogy fandraharahana ny olona hananganana fahalalana momba ny orinasa, vokatra na serivisy eo am-pananganana fifandraisana amin'ilay bilaogera.
Ny olona mitsidika ireo seha-pihariana mba hitady fanampiana na hanome fanampiana.
Ao amin'ny bilaogy iray, ny bilaogera manokatra, mitarika ary mitondra ny resaka. Amin'ny forum, afaka manao izany ny rehetra.
Amin'ny forum iray, mahazatra ny mpitsidika ny mifanampy. Amin'ny bilaogy dia tsy fahita firy izany. Averina indray, ilay bilaogera no mitondra ny resaka.
Ny forum iray dia mety hisokatra tanteraka amin'ny fandraisana anjara. Ny bilaogy iray dia mety manana fifehezana bebe kokoa amin'ny antonony fanehoan-kevitra ary na dia ny fahaizana maneho hevitra aza.
Matetika ny mpamaky bilaogy dia nanorina fifandraisana tamin'ny bilaogera ary mahay kokoa hanaiky sy hiaro ny fanapaha-kevitr'izy ireo. Ny forum dia kely fotsiny ho an'ny maimaim-poana-amin'ny-toerana rehetra izay mety hitondran'ny mpitsidika bebe kokoa noho ny orinasa tenany.
Ity dia Forum
Rahoviana no fotoana farany nidiranao tamina tranonkala iray ary nahitanao ny 'Forum momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa' izay ahafahanao mamoaka ny fahasosoranao amin'ny orinasa iray? Tsy dia be loatra ve any? Tsia… ho mafy ny mitady azy.
Ny ankamaroan'ny forums ho an'ny orinasa dia ampiasaina hanenanana ny vidin'ny fanampiana amin'ny alàlan'ny famelana ireo mpampiasa hanampy ireo mpampiasa hafa. Ny forums forum dia mahafinaritra amin'izany, ary tena mamporisika ny olona hampiasa izany ho paikady hampihenana ny vidin'ny fanohanana aho. Raha manana ny orinasanao API, hahita tontolon'ny mpiara-miasa vonona hanampy anao ianao amin'ny forum misy azy ireo!
Ny forum dia azo ampiasaina ihany koa, indrindra amin'ny laharana, hitadiavana hevitra momba ny tsara indrindra / ratsy indrindra atolotry ny orinasa iray nefa tsy mamoaka ny teritery rehetra ary mamela ny olona hiantsoantso sy hiantsoantso. Ny forum dia mety ho fanadihadiana amin'ny hevitra… sarobidy kokoa noho ny fanadihadiana irery.
Tsy ho hitanao hampiasaina ho an'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izy ireo. Tsoriko fa somary mahamenatra ihany, sa tsy izany? Azonao an-tsaina ve ny forum iray izay ahafahanao mandefa fotsiny hoe ahoana ny orinasa iray mitsoka izany ho anao hatrany hatrany? Ny orinasa rehetra dia diso na tsy mahomby amin'ny fotoana iray hafa…. ny fametrahana azy rehetra ao amin'ny tahiry afovoany ho hitan'izao tontolo izao dia mety tsy ny tetika tsara indrindra!
Ho an'ny fitarainan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ny forme contact tsara dia miasa tsara indrindra. Rehefa tezitra amintsika ny mpanjifa dia mankasitraka ny fivoahana izy ireo ary, indraindray, dia mety hirona hanitatra ny tsy fahaizana sy ny fiatraikany amin'ny orinasany izy ireo. Tsy hevitra tsara ny fametrahana forum… fa ny famelana lalana tsotra ho an'ireo teknisianina mpanohana anao hamaly manokana ny mpanjifa tezitra dia tsy voavidim-bola.
Ny fahasamihafana eo amin'ny fitondran-tena lehibe indrindra eo amin'ny forum sy ny bilaogy dia ny resaka forum (fantatra koa amin'ny hoe 'kofehy') natombok'ilay mpitsidika. Matetika ny forum dia manana mpitarika tsy ara-potoana - ireo dia olona tena mitarika fiheverana betsaka na mitarika ny resaka amin'ny forum, saingy mety tsy solontena ofisialin'ny orinasa akory izy ireo. Ny bilaogy dia manana mpitarika ofisialy, mpanoratra ny lahatsoratra.
Ny resadresaka forum iray dia atomboka amin'ny kofehy izay azon'ny olona rehetra atomboka, toy ny antso vonjy na fitarainana. Midika izany fa ny orinasa mitantana ny forum dia tsy maintsy mihetsika amin'ny resaka ary tsy manana fotoana hitarihana ny resaka. Miaro ho azy ireo izy ireo, na inona na inona lohahevitra. Mahalana aho no nahita fanehoankevitra misy kofehy nivadika ho forum fitarainana raha tsy ny bilaogera no nangataka ny fitarainana. Matetika aho no nahita famelabelaran-kevitra nirehitra 'novonoina' haingana avy amin'ireo mpamaky hafa ao amin'ny bilaogy - satria izy ireo dia manohana be ny orinasa.
Lahatsoratra bilaogy no noforonin'ny mpanoratra ny lahatsoratra. Ho an'ny bilaogin'ny orinasa dia ity no lakilena. Mety hisokatra ho an'ny tsikera ianao raha jerena ny lohahevitr'ilay lahatsoratra, fa ny tombony azonao dia ny hitarika ny resaka mavitrika. Ny olona maneho hevitra dia mpamandrika tonga amin'ny bilaoginao mba hikatsaka fahalalana na fifandraisana aminao.
Zava-dehibe ny hanavahana azy roa noho ny fitondran-tena sy ny tanjon'ny mpitsidika azy, ary koa ny antony hampiasana azy ireo! Tsy mitsidika ny bilaoginao ny olona hitaraina, mitsidika izy ireo hianatra. Ary ny bilaogy dia manome fomba azo antoka hananganana fifandraisana amin'ireo mpamaky anao - miaraka amin'ny tombony azo avy amin'izany ianao mitondra ny resaka.
Tags: kitapom-batsy nomerikaeloquafandoavam-bola amin'ny findayfifandraisana akaiky eny an-tsahanfcpage speedSearch Marketinghafainganam-pandehan'ny tranonkala
28 Okt 2007 amin'ny 7:42 PM
Interesting. Manontany tena aho raha tratranao ity lahatsoratra ity izay nosoratako herinandro vitsivitsy lasa izay izay nanandrana nanazava ny fitoviana misy eo amin'ny bilaogy sy ny forum. http://www.jeffro2pt0.com/similarities-between-a-blog-and-forum/ Ny mahasamihafa indrindra azy roa tonta dia ny bilaogy iray mibaiko ny resaka raha manome forum ireo mpampiasa fotoana hanombohana ny fifanakalozan-kevitr'izy ireo manokana.
Oct 29, 2007 amin'ny 7: 51 AM
Tsy nanao izany aho, Jeffro2pt0, fa tena nanondro izany. Asa tsara amin'ny fanondroana ny fahasamihafana sy ny fitoviana!
(Ao ambadiky ny famakiako REHETRA aho izao !!!)
28 Okt 2007 amin'ny 8:14 PM
Lahatsoratra tsara. Gaga aho amin'ny hoe isaky ny inona ny tadiavin'ny prospect forum ho an'ny tranonkalany. Rehefa mihady lalindalina kokoa aho dia hitako matetika fa be ny valin'ny fiarahamonina tadiavin'izy ireo nefa tsy tena te hanoratra atiny akory izy ireo.
Ny fanantenan'izy ireo dia ny mpanjifany manao ny asa rehetra. Tiako ny valinteninao momba ny mahasamihafa azy, saingy valin-teny sahisahy izany. Betsaka ny mpamaham-bolongana no tsy mihetsika amin'ny fiheverana fa ny bilaogy dia tokony "mifehy" resaka iray. Raha izaho manokana dia heveriko fa izany no antony. Ny bilaogy dia mora vakiana kokoa noho ny forum satria tsy misy afaka miantsoantso mafy na mandiso ny resaka amin'ny bilaoginao raha tsy avelanao.
Ary ho an'ny orinasa, tsy misy zava-dehibe kokoa.